သီဟိုဠ်သီး စားကြမယ်။ ...................... - Hello Sayarwon
သီဟိုဠ်စေ့က စားလို့ သလို သီဟိုဠ်သီး ၊ သီဟိုဠ်ရွက်တွေကလည်း စားလို့ ရပါတယ်။ စားလို့ ရရုံတင် မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးဖက်လည်း ဝင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ငါး၊ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်တို့နဲ့ ချဉ်ဟင်းချက်စားလေ့ရှိတဲ့ သီဟိုဠ်သီးလေး စားရင်း ဘယ်လို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ ရရှိနိုင်လဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးပါမယ်။
သီဟိုဠ်သီး က ဟင်းချက် စားလို့ရသလို သံပုရာသီးလေးနဲ့ ဖျော်သောက်ပေးလို့လည်း ရပါတယ်။ မှည့်လေ အရသာ ကောင်းလေလေပါ။ မမှည့်ရင်တော့ ဖန်တာ၊ လေချုပ်တာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သီဟိုဠ်သီးဆိုတာ သီဟီုဠ်ပင်ရဲ့ အသီးပါ။ အစိမ်းမှာ အရောင်က အစိမ်းရောင် ရင့်ရင့်လေး ဖြစ်ပြီး မှည့်လာရင်တော့ အဝါရောင်လေး ပြောင်းလာပါတယ်။ အနီရဲရဲလေး ဖြစ်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
သီဟိုဠ်သီးရဲ့ ထူးခြားချက်က အစေ့က အပြင်ဘက်မှာ ရှိနေတာပါ။ ပုံစံလေး ဆန်းသလို အရသာလေးလည်း ကောင်းပါတယ်။
သီဟိုဠ်သီးမှာ ဘယ်လို အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေလဲ …….
သီဟိုဠ်သီးမှာ အခုလို အာဟာရဓာတ်လေးတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
သီဟိုဠ်သီး စားတာက ကျန်းမာရေး ထောက်ကူပေးနိုင်လား …….
သီဟိုဠ်သီး စားရင်း အခုလို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သီဟိုဠ်သီးက အရိုးတွေကိုတင် သန်မာစေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ရှူးတွေ၊ ကြွက်သားတွေကိုလည်း သန်မာစေနိုင်ပါတယ်။ ပရိုတင်း ပါဝင်နေမှုက ကြွက်သားတွေ သန်မာစေဖို့ အထိရောက်ဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သီဟိုဠ်သီးမှာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ကွဲပွားတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ဟန့်တားပေးနိုင်တဲ့ flavonols အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ proanthocyanins ဒြပ်ပေါင်း ပါဝင်နေတာကြောင့် ကင်ဆာ မဖြစ်စေဖို့ တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ အူမကြီး ကင်ဆာ မဖြစ်စေဖို့လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သီဟိုဠ်သီးမှာ ဗီတာမင်တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးပြီး ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေပါတယ်။ ဇင့်ဓာတ် ပါဝင်နေမှုကလည်း ကိုယ်ခံအားကို အထိရောက်ဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါ။
ဖျားနာမှု ကင်းစေပြီး အနာကျက် မြန်စေဖို့လည်း အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သီဟိုဠ်သီးက အဆီပါဝင်မှု များပေမယ့် အကျိုးပြု ကိုလက်စထရော ပါဝင်မှု များတာကြောင့် သွေးတွင်း အဆီဓာတ်ကို ထိန်းပေးနိုင်းပြီး သွေးမလဲစေဖို့ ကာကွယ်ပေးသလို သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
နှလုံး ကျန်းမာစေဖို့လည်း အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးပါတယ်။
မျက်လုံးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ဖြစ်တဲ့ lutein နဲ့ zeaxanthin တို့ ပါဝင်နေတာကြောင့် အမြင်အာရုံကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ နေရောင်ကြောင့် မျက်လုံး ထိခိုက်ပျက်စီးတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။
သွေးအားနည်း ရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတယ်။
သီဟိုဠ်သီးမှာ သံဓာတ်ပါဝင်နေတာကြောင့် ကိုယ်ခံအားကို အားကောင်းစေပြီး သွေးအားနည်းရောဂါ မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေဆီကို အောက်ဆီဂျင် ရောက်ရှိစေပြီး သွေးအားကောင်းစေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်မှာပါ။
ဗီတာမင် C ပါဝင်နေတာကြောင့် ကော်လာဂျင် ထွက်ရှိအောင် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းစေမှာပါ။ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်မှာပါ။ copper ပါဝင်နေတာကြောင့် အရေပြား ပိုးဝင်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ။
သီဟိုဠ်သီးက သွေးတွင်း ကိုလက်စထရောကို ထိန်းညှိပေးပြီး နှလုံးကျန်းမာစေသလို ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေမှုက အဆာခံစေနိုင်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကို အကောင်းဆုံး ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။
သီဟိုဠ်သီးလေးစားရင်း အခုပြောခဲ့တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရယူလိုက်ပါ။
Here Are Some Of The Amazing Benefits Of Consuming Cashew Fruit https://www.herzindagi.com/health/cashew-apple-health-benefits-article-102561 Accessed Date 15 November 2021
15 HEALTH BENEFITS OF CASHEW FRUIT https://shopinverse.com/blogs/health-guide/15-health-benefits-of-cashew-fruit Accessed Date 15 November 2021